10ka Sababood ee Ugu Wanaagsan ee Loogu Dhisi Karo Website-kaaga WordPress | Martech Zone
Meherad cusub, dhammaantiin waxaad diyaar u tihiin inaad suuqa gashaan laakiin hal shay ayaa ka maqan, degel. Ganacsi ayaa muujin kara astaantooda isla markaana si dhakhso leh ugu soo bandhigaya qiimayaashooda macaamiisha iyagoo gacan ka helaya degel soo jiidasho leh
Haysashada websaydh weyn oo rafcaan leh waa waajib maalmahan. Laakiin maxay yihiin xulashooyinka lagu dhisayo degel? Haddii aad tahay ganacsade ama aad rabto inaad dhisto barnaamijkaaga markii ugu horreysay markaa WordPress waa wax ku dhammayn kara shuruudahaaga hab kharash-ku-ool ah.
Aynu hubino 10-ka sababood ee soo socda oo ah sababta WordPress ay muhiim ugu tahay ganacsigaaga inuu ku noolaado suuqan weligiis isbedelaya.
Ku dhis Website-kaaga WordPress adigoo adeegsanaya qaab kharash-ku-ool ah - WordPress gabi ahaanba waa bilaash. Haa! waa run. Macno malahan haddii aad rabto degel ganacsi ama aad rabto aag blog ah oo shaqsiyeed, xaqiiqda ayaa ah WordPress ma qaado dacwado dheeri ah ama qarsoon. Dhinaca kale, WordPress waa nidaam furan oo kuu oggolaanaya inaad hagaajiso ama wax ka beddesho koodhkeeda ilaha taas oo macnaheedu yahay inaad si fudud u qaabeyn karto boggaaga muuqaalkiisa ama shaqadiisa.
Isdhexgalka Isticmaalaha Saaxiibtinimada - WordPress waxaa loo abuuray hab fudud oo caawiya dhammaan dadka farsamada iyo kuwa aan farsamada ahayn. Waa sababta ugu weyn ee ka dambeysa baahida weyn ee loo qabo WordPress adduunka oo dhan. Dhinaca kale, WordPress waa fududahay in la isticmaalo waxayna sidoo kale u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay abuuraan boggaggooda, qoraalkooda, menusyada ugu yar. Waxaad dhihi kartaa waxay dadka ka dhigeysaa shaqo fudud.
Si fudud loo soo dejisan Dulucda iyo Plugins-ka Bilaashka ah - Waxaan horey u soo sheegnay in taageerada WordPress aad ku abuuri karto websaydhkaaga hab kharash-ku-ool ah. Intaa waxaa sii dheer, haddii aadan haysan nooca ugu sarreeya ee WordPress, ha ka welwelin, halkan boqolaal ka mid ah mawduucyada bilaashka ah iyo fiilooyinka ayaa la heli karaa oo aad si fudud ugu soo dejisan kartaa websaydhkaaga. Haddii aad ku hesho mawduuc ku habboon bilaash markaa way badbaadin kartaa boqolaalkaaga doolar.
WordPress si fudud Miisaan ayuu u yeelan karaa - Si aad u dhisto degel wax ku ool ah waa inaad iibsataa domain iyo martigelin. Kharashka martigelinta waa $ 5 bishiiba marka magac domain ah uu kudhowaad $ 10 sanadkiiba. Asal ahaan, WordPress ayaa kor u qaadi kara baahidaada ganacsi sidaa darteed lacag kama qaadeyso markaad gaarto taraafikada kugu filan ama aad rabto inaad ballaariso websaydhkaaga. Waxay umuuqataa iibsiga ciyaarta fiidiyowga. Markaad haysato, cidina ma joojin karto inaad isticmaasho.
Diyaar u ah Isticmaalka - Kadib rakibida WordPress waxaad isla markiiba bilaabi kartaa shaqadaada. Uma baahna qaabeyn, marka laga reebo tan waxaad si fudud u habeyn kartaa mawduucaaga, iyo sidoo kale waxaad isticmaali kartaa qalab ku habboon. Inta badan waxaad raadineysaa rakibid sahlan oo isku dubbaridi karta quudinta warbaahinta bulshada, faallooyinka, iwm.
WordPress ayaa si joogto ah u hagaajinaya - Cusbooneysiinta joogtada ah looguma talagalin amniga kaliya; waxay si joogto ah u bixiyaan astaamo horumarsan oo ka dhigaya barxadda inay u fiicnaadaan dhammaan dadka isticmaala. Intaa waxaa sii dheer, kooxda khabiirka ah ee soosaarayaasha 'ayaa cusbooneysiinaya qalab cusub oo ka duwan si ay u qanciso adeegsadaha. Sannad kasta waxay soo bandhigaan astaamo u gaar ah oo u oggolaada isticmaaleyaasha inay sahamiyaan.
Noocyada Warbaahinta Badan - Qof kastaa wuxuu rabaa inuu ka dhigo mareegtooda mawduucyo hodan ah oo soo jiidasho leh. Oo waxaad rabtaa inaad ku darto macluumaad dheeri ah bogga "nagu saabsan". Websaydh ayaa noqda mid soo jiidasho leh haddii ay ku jiraan fiidiyow xiiso leh ama sawir muuqaal ah. Haa! WordPress wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka aad ugu darto kuwa si habsami leh hab cajiib ah. Waa inaad jiidataa oo aad hoos u dhigtaa sawir ama waad nuqulan kartaa-dhajin kartaa iskuxirka fiidiyowga aad dooran karto waxayna ku muuqan doontaa waqti ugu yar. Intaa waxaa sii dheer waxaad ku dari kartaa noocyada faylasha ee kala duwan, sida .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg iyo kuwo kale. Waxay ku siinaysaa xorriyadda aad ku shuban karto waxa aad rabto oo aan xad lahayn.
Ku Daabac Mawduuc Waqti Gaaban - Haddii aad rabto inaad ku daabacdo boostadaada qaab deg deg ah markaa WordPress waa inuu noqdaa xalkaaga hal-joogsi. Dhowr guji oo jiirkaaga ah, waxaad ku daabici kartaa waxyaabahaaga si macquul ah. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad haysato barnaamijka WordPress-ka ah taleefankaaga gacanta markaa waxaad ku daabici kartaa boostadaada meel kasta, waqti kasta.
Miyaad ku wareersan tahay HTML Code? - HTML maaha koob shaah oo qof walba leeyahay. Laakiin WordPress wuxuu ku siinayaa madal aad ku soo qori karto qoraalkaaga adigoon taageerin HTML. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad abuuri karto bogag oo aad dayactiri kartid qoraaladaada caadiga ah adigoon aqoon u lahayn HTML.
Waa mid sugan oo la isku halleyn karo - Shaki la'aan, WordPress waa madal horumarineed oo awood leh oo maareysa arrimaha amnigaaga sidoo kale. WordPress wuxuu muujiyaa cusbooneysiinta joogtada ah iyo boggaga amniga ee ilaaliya jawi aamin ah adiga. Iyada oo taxaddarrada aasaasiga ah qaarkood, waxaad si fudud ugu maamuli kartaa boggaaga WordPress jabsiga.
Sidaad ogtahay, WordPress waa degel shaqsiyeed ama ganacsi. Waxay si xariifnimo leh u xallisaa habka maaraynta maareyntaada waxayna kuu oggolaaneysaa xorriyadda daabacaadda iyadoon xuduud lahayn. Haddii aad rabto inaad dhisto websaydhkaaga oo aadan haysan qaddar kugu filan oo aad ku dhisto markaas WordPress wuxuu kuu noqonayaa xalkaaga hal-joogsi ah. Waad ku abuuri kartaa degel internet kuu gaar ah hab kharash-ku-ool ah. Waxaan rajeyneynaa in qodobkaan uu fikrad kaa siinayo waxtarka iyo muhiimadda WordPress ay u leedahay suuqan weligiis isbeddelaya.
Tags: Content Suuqeditorhtmlnoocyada multimediapluginsdiyaar u ah in la isticmaalolagu kalsoonaan karomiisaankaaaminmawduucyadainterface user-saaxiibtinimoWordPress
Ritesh Patil waa aasaasaha Mobisoft Infotech kaas oo ka caawiya bilowga iyo shirkadaha teknolojiyadda moobiilka. Wuxuu jecel yahay tikniyoolajiyadda, gaar ahaan teknolojiyadda moobaylka Isagu waa blogger jecel oo wax ku qoro codsi moobiil ah. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad horumarsan oo horumarin ku samaysa androidka oo leh xirfadlayaal barnaamijyada android-ka ku takhasusay oo soo saartay barnaamijyo casri ah oo moobiil ah oo dhinacyo kala duwan ah sida Maaliyadda, Caymiska, Caafimaadka, Madadaalada, Waxsoosaarka, Sababaha Bulshada, Waxbarashada iyo kuwo kaloo badan wuxuuna ku kasbaday abaalmarinno isku mid ah